Al-Shabaab oo xalay weeraray Xerada Maslax ee duleedka Suuqa Xoolaha – STAR FM SOMALIA
Al-Shabaab oo xalay weeraray Xerada Maslax ee duleedka Suuqa Xoolaha
Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday Xerada Maslax ee duleedka Suuqa Xoolaha degmada Huriwaa, iyadoo dagaal muddo saacad ku dhow socday uu dhex maray ciidamada AMISOM ee farisiinka ku leh xeradaas iyo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Hubka la isku weydaarsanayay oo u badnaa madaafiicda garbaha laga tuuro iyo qoryaha daran dooriga u dhaca ayaa laga maqlayay xaafadaha degmooyinka Yaaqshiid iyo Huriwaa.
Lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkaas, sidoo kale ma jirto wax war ah oo ka soo baxay AMISOM iyo talisyada kale ee ciidamada dowladda oo ku aadan weerarkan.
Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa baraha Internet-ka ee taageera ku sheegtay in weerarkan ay la eegatay xerada Maslaxa, ayna ku garaaceen madaafiic kuwa garbaha laga tuuro.
Xerada Maslaxa oo ku taala waqooyiga bari Muqdisho ayaa waxaa uu noqonayaa weerarkii u horeeyay ee toos ah Al-Shabaab ku qaadaan muddooyinkan.
Al-Shabaab ayaa kordhiyay maalmihii la soo dhaafay weerarada ay ka geysanayeen magaalada Muqdisho, iyadoo habeen hore qaraxyo la beegsaday agagaarka Hotel SYL iyo Beerta Nabadda, waxaana khamiistii hoobiyeyaal ku soo tuureen Madaxtooyada, taasoo ay dad rayid ah oo isku qoys ahaa ku geeriyoodeen.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo kulmay (Sawirro)